Ezinye izindlela zokuthola imibhalo engezansi efanele ku-Windows | Izindaba zamagajethi
Ukuthola imibhalo engezansi elungile yama-Movie wami ku-Windows
Umbulali Uviniga | | Ama-movie nochungechunge, Software, Windows
Uma sifuna ukujabulela i-movie emnandi ekhaya nabangane noma nomndeni, sinezinye izindlela ezimbili zokwenza lo msebenzi, enye yazo kungamandla faka noma iyiphi ingosi kuwebhu (njenge-YouTube) bese ubheka eyodwa ethakazelisa wonke umuntu. Singakhetha futhi ukulanda leyo movie kwikhompyutha yethu.
Uma silande futhi i-movie ikulimi oluhluke ngokuphelele kolwethu kuzofanele siqale ukufuna imibhalo engezansi efanelekile ukuze konke kuqondakale kahle. Kulesi sihloko sizokhuluma ngezinye izindlela ezimbalwa ongazisebenzisa kalula landa imibhalo engezansi ye-SRT, okusho ukuthi, labo abavumelanisa kahle nokuhamba komlomo wabalingisi befilimu.
1 1. Usebenzisa i-Sublight ku-Windows
2 2. I-SubiT-App ukuthola imibhalo engezansi kulawa ma-movie
1. Usebenzisa i-Sublight ku-Windows
Phambilini, sifuna ukusho ukuthi uma ngabe ulande uchungechunge lwamafayela e-RAR ane-movie ngaphakathi, ungaqala ngokuya kumathuluzi esishilo ngenhla ukugwema ukukhipha ividiyo. Noma kunjalo, le nqubo ngeke ibeke ngokuzenzakalela imibhalo engezansi uma leli fayela lifakiwe ngaphakathi kwe-RAR. Esizokusho ngokulandelayo kudinga ukuthi sibe nefayela levidiyo eligcinwe kwi-hard drive ngoba ukuphela kwendlela esingalanda ngayo imibhalo engezansi eyiyo ehambelana nayo.
Ithuluzi esizokhuluma ngalo okwamanje linegama le- «Sublight«, Okukhululekile ngokuphelele nokuthi ongayisebenzisa kusuka kuwebhusayithi yayo esemthethweni. Uma usuhambile lapho kuzofanele usebenzise inkinobho yokulanda etholakala maphakathi kwesikrini (njengesithombe-skrini esibekwe phezulu). Uma usebenzisa leli thuluzi, uchungechunge lwamafayili ahambisanayo luzoqala ukulanda futhi ngokuhamba kwesikhathi, umsebenzisi uzocelwa ukuthi abhalise nge-akhawunti yamahhala.
Ungasebenzisa ifomu noma i-akhawunti yakho ye-Gmail, lokhu kube enye indlela engcono kakhulu njengoba lokhu kuzovimbela ukubhaliswa kwemininingwane yomuntu siqu. Lapho usunayo i-interface uqobo, kufanele nje sesha ngesiphequluli sefayela kuvidiyo edinga imibhalo engezansi. Ngasikhathi sinye kuzofanela ukuthi uhudulele kusixhumi esibonakalayo sethuluzi, lapho-ke kuzoqala ngaso leso sikhathi sisebenze ukubasesha ezinjini zokusesha (ikakhulukazi ezakwaGoogle)
Ezimweni eziningi, imiphumela iyasebenza, yize kungahle kube namavidiyo ambalwa angahle angabi nayo imibhalo engezansi ongayilanda kuwebhu; Uma ithuluzi lithola imibhalo engezansi eceliwe yevidiyo eshiwo, kuzofanela ukhethe eyodwa yazo emiphumeleni, cngenkinobho yegundane kwesokudla ukukhetha enye yezinketho kwimenyu yokuqukethwe.
2. I-SubiT-App ukuthola imibhalo engezansi kulawa ma-movie
Leli thuluzi futhi ikunikeza ukuthi kungenzeka thola imibhalo engezansi yochungechunge lwe-TV noma i-movie. I-interface enayo intofontofo kakhulu futhi ine-minimalist ngasikhathi sinye, ngoba lapho kuzofanele sisebenzise kuphela ingilazi yokukhulisa encane ebheke ngasesandleni sokudla ukuthola iziphakamiso zethu.
Ungabhala igama le-movie esikhaleni esiphezulu phezulu noma ukhethe «…» etholakala ohlangothini lwesokunene ukuvula isiphequluli sefayela bese ukhetha ividiyo esiyidinga imibhalo engezansi. Uma sinenhlanhla, ngemizuzwana embalwa imibhalo engezansi ehambisanayo izovela. Kuyafaneleka ukusho ukuthi ekusebenzeni kokuqala (ngemuva kokufakwa) kwaleli thuluzi, umsebenzisi kufanele achaze ulimi lwezihloko azidingayo kumafayela wakhe wevidiyo.
Sinikeze amathuluzi amabili, nezinye izindlela ezimbalwa esizokhuluma ngazo endatshaneni elandelayo. Umphumela omuhle noma omubi wemibhalo engezansi etholwe ngenye yalezi zindlela ezimbili uzoncika kakhulu ohlotsheni lwefilimu esiyiphakamisayo. Uma indala kakhulu, ngokuqinisekile sizoba nemiphumela emibi.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Ikhaya » Ama-movie nochungechunge » Ukuthola imibhalo engezansi elungile yama-Movie wami ku-Windows
Thola imfashini "yamaconsi afile" nokuthi ungayakha kanjani kalula
Izikhulumi zeClint Freya: Ukubuyekezwa Kwevidiyo Nokuhlaziywa